La yaabka Dunida: Hooyooyin Caruur ah oo heysataan caruur ay dhaleen | Filimside.net
Home » Arimaha Bulshada » La yaabka Dunida: Hooyooyin Caruur ah oo heysataan caruur ay dhaleen
La yaabka Dunida: Hooyooyin Caruur ah oo heysataan caruur ay dhaleen
Halkaan waxan idinku heynaa sagaal gabdhood oo ka yar sagaal jir ah caruur umulay ama hooyo u noqday laguna soo daabacay shabakada Mirror ee xarunteeda tahay UK.
1. Lina Medina, oo ku dhlatay magalada Ticrapo ee dalka Peru, waxay dhashay wiil yar oo magaciisa la yiraahdo Gerardo.gabadhan yar ee Lina ayaa qalliin lagu sameeyay.
Gabdhan reer Beru da’dedu waxay tahay shan sano iyo toddoba bilood waxayna dhalatay May 1939. Waalidkeed waxay u maleeyeen in ay gabdhoda burocalasho kaga taal, laakiin markii loo qaaday isbitaal, waxaa la ogaadey inay tahay toddoba bilood uur ah.
2. Yelizaveta “Liza” Gryshchenko ayaa lix jir eheed markii gabadhaan oo u dhalatay dalkii hore loo oran jiray midowgii soofiyeeti bishii August 1934-kii. Liza Aabihii dhalay wuxuu ahaa 69-jir. Qoyska liza way ay ka guureen fadeexadaas kadib magaalada ay deganaayeen.
3. Gabadh lix jir ah oo magaceda lagu soo gaabiye ‘H’ ayaa qalliin ku umushay bishii June 1972 ee Delhi, Hindiya. Markii hore waxaa walidkeed ay dhigeen isbitaal iyadoo loo maleynayo in uu haayo calool-xanuun.
4. Gabar Hindi ah oo aan la aqoonsan ayaa dhimatay inta ay dhaleysay, iyada iyo cunugii ay dhashay , bishii Agoosto 1933. Waxayna ahayd siddeed sano jir.
5. Griseldina Acuna, oo u dhalatay wadanka Colombia, ayaa la sheegay inay dhashay ilmo Sebtembar 1936, da’doodu ahayd sideed sano iyo laba bilood.
6. Mum-Zi, oo ka soo jeeda jasiiradda yar Calabar ee Nigeria, ayaa noqotay hooyo da’deedu ahayd siddeed sano iyo afar bilood bishii Agoosto 1884.
7. Gabadh u dhalatay dalka Colombia ayaa la ogaaday in ay uur leedahay kadib markii boolisku ay ka shakiyeen gabadhaan caloosheda weyneed in ay inay tahriibinayso daroogo. Baaritaan ka dib ayaa lagu ogaaday gabadhu ahayd 32 toddobaad uur ah oo markaas da’deedu waxay eheed sideed sano iyo shan bilood ah Sebtembar 2004.
8. Hilda Trujillo, oo u dhalatay wadanka Peru, ayaa dhashay gabadh, tas oo eheed curadkeda ugu horeysay ee Maria del Rosario bishii December 1957 . Hilda markii ay jirtay sideed sano iyo toddoba bilood,Waxana kufsaday nin ilmo adeer ay ahaayeen kaas oo markii danbe falka kufsiga dartis xabsi u galay.
9. Kow iyo toban jir u dhalatay dalka nagira ayaa ka soo muuqatay sawiradeeda baraha bulshada ayada muujineysa in ay xaamilo tahay sanadkaan
WD/Abukar Mohamed Simoow
Waxaa Aqrisay 1,282
2 Responses to La yaabka Dunida: Hooyooyin Caruur ah oo heysataan caruur ay dhaleen
waxaa dhintay shashi kapoor soo daabaca
sawiradana inaaad soo raacisaan way fcnan lahayd
© 2017, ↑ Filimside.net